Shanta beddelka ugu wanaagsan ee Google Inbox loogu talagalay Android | Androidsis
Muddo bil ah ayaa laga joogaa intaas Google waxay ku dhawaaqday inay joojinayaan cusbooneysiinta Inbox de qaab rasmi ah 2019. Macmiilkeeda iimaylka ayaa si aad ah loogu qiimeeyay waqtigeeda suuqa, laakiin waxay umuuqataa inaysan ku guuleysan inay ka guuleysato tiro ku filan oo isticmaaleyaal ah. Sababtaas awgeed, shirkaddu waxay qaadatay go'aanka ah inay ka tagto adeeggan. Taas oo ku qasbeysa isticmaaleyaasha isticmaala inay raadsadaan waxyaabo kale.
Kadib Waxaan kuu dhaafi doonaa taxane kale oo aad ku beddeli karto Google Inbox. Fursadaha kale ee aad ugu isticmaali karto emayl si raaxo leh taleefankaaga Android. Marka haddii aad raadineysay codsi cusub oo boostada ah, hubaal waxaa jira mid adiga ku xiiseynaya xulashooyinkaas.
2 BlueMail - Email & Kalandarka
3 Muuqaalka Microsoft
Adeeg kale oo emayl Google ah iyo dhaxalka dabiiciga ah ee Inbox. Waa codsi caan ah, oo aan ognahay inaan adeegsanno aadna ugu fudud macaamiisha. Intaas waxaa sii dheer, waqti ka dib waxay ku dartay qaar ka mid ah shaqooyinkii ka jiray Inbox, sida kuwa suurtogalnimada in laga noqdo dirista emaylka ama suurtagalnimada isticmaalka emayllada sirta ah, sidaa darteed asturnaanta ayaa waliba muhiim ku ah.
Waa codsi si aad ah u soo fiicnaaday muddo ka dib, oo lagu darayo hawlo badan oo cusub, oo siinaya fursado badan kuwa isticmaala Android. Beddelka aad ogtahay inuu had iyo jeer ku siinayo waxqabad wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lala jaan qaadayaa inta kale ee adeegyada Google, taas oo adeegsadayaal badan u sahlaysa isticmaalkeeda.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Ma lihin wax iibsi ama xayeysiis nooc kasta ha ahaadee.
BlueMail - Email & Kalandarka
Marka labaad waxaan helnaa ikhtiyaarkan kale. Tani waa ikhtiyaar aan la aqoon inta badan isticmaalayaasha Android, laakiin Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aan maanta heli karno. Marka waa inaad xisaabta ku darsataa haddii aad raadineyso beddelka Inbox ee taleefankaaga. Waa barnaamij u muuqda naqshadiisa. Waxay leedahay isdhexgal runti fududahay in la isticmaalo, taas oo noo ogolaaneysa inaan ku dhex maro emaylkeena ehelkeena wadarta raaxada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan haynaa tiro badan oo hawlo ah oo laga heli karo dhexdeeda.
Muuqaal kale oo ay tahay inaan iftiimino ayaa ah inuu la jaanqaadi karo kuwa kale sida Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, iCould iyo Office 365, iyo kuwo kale oo badan. Maxaa noo oggolaan doona isdhexgal wanaagsan oo lala yeesho adeegyada kale ee aan ku haysano taleefankeena Android. Hawlaha aan ka helno waxaa ka mid ah qaabka mugdiga ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagu cusbooneysiiyaa soo noqnoqosho weyn, oo soo bandhigeysa shaqooyin cusub oo cusbooneysiin ah. Marka si joogto ah ayey u hagaagtaa.
Ku soo degsashada arjigan beddelka ah ee 'Inbox' waa bilaash. Intaas waxaa sii dheer, kuma haysano wax iibsi ama xayeysiin gudaheeda.
Saddexaad waxaan helnaa mid ka mid ah codsiyada emaylka ugu caansan ee loo heli karo Android. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aan ku helno sanduuqa Inbox maanta. Iskuxirkiisa waxaa yaqaan dadka isticmaala badankood waana runti fududahay in la isticmaalo. Naqshadeedu waxay si fiican ula qabsaneysaa taleefanka, kaas oo u oggolaanaya adeegsi runtii sahlan. In kastoo tani aysan ahayn waxa kaliya ee ka dhex muuqda codsigan.
Heerka shaqooyinka waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran ee aan heli karno. Gaar ahaan waxa xusid mudan joogitaanka kalandarka, oo noo oggolaanaya inaan abaabulno ballamahayaga ama howlaha aan u baahan nahay inaan fulino. Sidoo kale, wararkii ugu dambeeyay asturnaanta barnaamijka ayaa la hagaajiyay gaar ahaan. Waxaan fursad u leenahay inaan tusno kaliya emayllada muhiimka ah, si aan ugu maamuli karno si hufan.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Gudaha gudaheeda waxaan ka helnaa xayeysiis, in kastoo aysan dhibsanayn ama duulaan ahayn, nasiib wanaag.
Codsiga afraad ee liiska ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican haddii aad rabto inaad awood u yeelatid arrimo badan oo ka mid ah. Waad habeyn kartaa interface-ka Aqua Mail gebi ahaanba, taas oo kuu oggolaan doonta inaad wax walba hagaajiso si ay kuugu raaxeyso inaad u isticmaasho oo aad gacanta ugu dhigto howlaha adiga kuugu anfacaya marka aad maamulayso emaylkaaga. Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee ay na siiso.
Sidaa darteed, waa beddel wanaagsan oo loo helo Inbox. Interface waa fududahay in la isticmaalo, waxay noo ogolaaneysaa inaan abaabulo wax walba qaab fudud. Iyo xagga shaqooyinka, wuxuu ina siinayaa isla shaqooyinka aan ku qabno inta badan codsiyada boostada elektiroonigga ah ee loogu talagalay Android. Markaa waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku qabanno wax kasta oo aan ku qabanno kuwa kale si guud oo caadi ah. Sidoo kale waa in la sheegaa inay la jaan qaadi karto macaamiisha emaylka ugu badan ee suuqa ku jira, sida Gmail, Outlook ama Yahoo, iyo kuwo kale oo badan.
Ku soo degsashada codsigan Android waa bilaash. Gudaha gudaheeda waxaan ku leenahay xayeysiis iyo wax iibsi, taas oo ah in lagu shaabadeeyo rukhsad na siineysa taxane ah hawlo dheeri ah. Waad hubin kartaa haddii waxa ay bixiso ay dantaadu tahay.
Haddii aad raadineyso codsi u eg Inbox, gaar ahaan dhanka xawaaraha, markaa codsigani runtii waa ikhtiyaar wanaagsan oo tixgelin leh. Waa codsi soo bandhigaya mid aad u fudud in la isticmaalo isdhexgalka, kaas oo ka caawiya adeegsadaha inuu si fiican u socdo, iyo sidoo kale inuu marin u helo dhammaan howlaha ku jira. Deg deg ah oo raaxo leh in la isticmaalo, markaa xaqiiqdii waa mudan tahay in maskaxda lagu hayo markasta.
Google Play laftiisa ayaa si togan u qiimeeyay codsigan, kaas oo ka mid ahaa barnaamijyada heer sare. Naqshadaynta abku waa fududahay, aad nadiif u tahay oo ay ku jiraan faahfaahin yar oo aan ka jeedsanayn hawsheeda ugu weyn, taas oo ah in la soomo Waxaan haynaa mid ka mid ah howlaha xiddigga ee Inbox oo ku dhex jira. Waa caawiye inaga caawiya inaan si otomaatig ah u kala shaandhayno emaylka. Maxaa inaga caawinaya inaan shaandhayno farriimahaas muhiimka ah oo aan inta kale uga tagno xagga dambe, ama ogaano waxa spam ah. Waxay naga caawinaysaa sidii aan u maamuli lahayn waraaqayaasheena si aad u hufan. Intaa waxaa dheer, waxaan taageero u haynaa bixiyeyaasha kale, sida Outlook, Gmail ama Yahoo, iyo kuwo kale.
U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Gudaha gudaheeda kuma lihin wax iibsi ama xayeysiis noocuu doono ha ahaadee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Beddelka ugu fiican ee Google Inbox